Inyanga igajwe yisikhwele 'yabulala intombi' | News24
Inyanga igajwe yisikhwele 'yabulala intombi'
Durban - Igajwe yisikhwele qede yabulala intombi yaseCongo, eNanda, enyakatho yeKwaZulu-Natal indoda okusowa ukuthi ibingafuni ukwamukela ukuthi ucu kalusahlangani.
USiboniso Gumede, 39, usolwa ngokuklinya abulale uNomthandazo Mkhize, 26, obeyintombi yakhe, okuthiwa ubelokhu emncenga njalo ukuba babuyelane.
USibusiso Mkhize onguninalume kaMkhize, okunguyena ozibambele umsolwa wamhambisa emaphoyiseni, uthi umshana wakhe uphume kubo ngoMsombuluko ngeledlule eyofuna imali yokudla kuyise ohlala endaweni ebizwa ngokuthi iseNamibia khona eNanda.
Uthi abashana bakhe bebehlala bodwa emzini kanina oshone ngoNovemba nyakenye.
Utshele ILANGA ukuthi umufi uyitholile imali kuyise wabe eseyoyiphuza ejoyintini kwaze kwahwalala.
Esendleleni ebuyela ekhaya, uhlangane noGumede ehamba nabangani bakhe ababili, owesilisa nowesifazane.
Kuthiwa umsolwa ucele umufi ukuba bayohlala endlini yakhe, uzothenga obunye utshwala baqhubeke nokuphuza.
Umufi uhambile nomsolwa nomngani wakhe wesilisa, owesifazane wagoduka wathi uyolala.
OLUNYE UDABA: Kudutshulwe kwashona abantu abane eThekwini
Kubikwa ukuthi laba bobathathu banikele endlini kamsolwa bayoqhubeka nokuphuza kwaze kwaba sebusuku.
Kakucaci ukuthi ingxabano isuswe yini ngesikhathi sebesendlini kaGumede, okwenze ukuba aze abulale umufi.
Phakathi kwamabili, kuthiwa umsolwa uye kumngani wakhe wesifazane - abebehamba naye ngesikhathi behlangana noMkhize – wafike wazibuzisa umufi ukuthi uphelelephi, akasamboni.
Umsolwa utshele umngani wakhe ukuthi umufi uphume endlini yakhe esephuze kakhulu, akamazi ukuthi uphelelephi, uhamba ebheka yena ngoba unovalo kwazise ubesephuze kakhulu futhi ehamba yedwa kanti akuphephile.
Kuthiwa ngakusasa ngoLwesibili ekuseni, kutholakale isidumbu sikaMkhize sihudulelwe endleleni ngasemzini kamsolwa.
Okhulumela amaphoyisa aKwaZulu-Natal, uCapt Thembeka Mbhele, uthi umsolwa uboshwe ngoLwesithathu olwedlule, wavela eNkantolo yeMantshi eNtuzuma ngoMsombuluko, icala lahlehliselwa umhlaka 14 kuJuni.